Kaas oo ku daraya-ons aad jeclaan lahayd in la cusboonaysiiyo?
sida loo rito fsx Addoon (1 Posts)
IL-76 MD cusub / dhibaatooyinka flaps Waan kaheli karaa habka aan udajiyo duubista! (2 Posts)
Duuliyaha AI (3 Posts)
Diyaaradda Air France v2.1 FSX > 766 202
Airbus A320 Family ahee Pack F> 661 891
Emirates Fleet FSX & P3D > 456 871
Ahaa Godey raxan kama dambaysta pack v> 299 965
Airbus A380-800 VC Air France> 296 430
Téléchargements: 766 202
Téléchargements: 661 891
Téléchargements: 456 871
Téléchargements: 299 965
Téléchargements: 296 430
Téléchargements: 187 185
Xidhmada Northrop Grumman E-11A Sentinel USAF Xirmooyinka FSX & P3D
Waayo, FSX nooca guji halkan. Atlas Cheetah waa diyaarad dagaal oo ciidamada cirka South Africa. Waa casriyeyn weyn ee Dassault Mirage III. Saddex kala duwanaansho oo kala duwan ayaa la sameeyay, labada kursi ee Cheetah D, iyo Cheetah E iyo Cheetah C. Cheetah's-ka ayaa howlgab noqday waxaana lagu beddelay Saab JAS-
Jaaliyaddeena ayaa sii kordheysa maalinba maalinta ka dambeysa, Rikoooo hadda waa 179,244 xubnaha ka diiwaangashan, Rikoooo iyo kuwa abuura ee ku darsaday waxay kuugu mahad naqi karaan kugu filnaanta kalsoonida iyo danta aad na tusayso. Waxaan sameyneynaa sida ugu fiican ee aan u heyno qalabkeena iyo dib loo cusbooneysiiyo. Maxaa ka dhigaya in aan ka duwanno goobaha kale ee duulimaadyada duulimaadyada kale waa tayada adeegyadayada iyo adeegga aan bixino ee aan bixino lacag la'aan.
1950 Cruzeiro do Sul: La Socodka Duuliyaha Duuliyaha
Ku soo dhowow wargeyskayaga si toos ah loogu ogeysiiyo e-mail marka aan ku darno ama cusbooneysi galo, waa mid aad u sahlan oo ma maqnaan doono wax war ah. Waxaan u soo dirnaa hal email oo bil ah.
E-mailkaagu waa mid si qarsoodi ah loo ilaaliyo, loomana qaybin doono dhinac saddexaad.